Several Best House Plants - China Qingdao King Good New Materials
Several Best House Plants
Kunyange kune uswa zhinji miti inogona kutamba mhepo yakachena, zvinobudirira bvisa basa indoor kusvibiswa, asi kuti yatainge tabva kugadziridza dzimba pasi nemakemikari kusvibiswa, Aloe, Chlorophytum, Sansevieria nezvimwe zvirimwa ndiyo inonyatsobudirira dzinongoitika deodorant.
NASA masayendisiti pashure pemakore 20 kutsvakurudza akawana kuti muna 24-awa chiedza mamiriro, hari ina Aloe anogona kubvisa 1 cubic mita mhepo yaiva muna 90% formaldehyde; hari Chlorophytum anogona kuva Stoves, midziyo yemagetsi, mapurasitiki zvigadzirwa The kugovera carbon monoxide uye senitrogen peroxide takabatikana nokuneta, asiwo kusveta kure 86% kubva formaldehyde; mashizha nezvimwe guru mashizha chirimwa Mashizha zvinogona kupinza anopfuura 80% kubva indoor inokuvadza magasi. Saka, muna 15 mativi mamita ane imba yokutandarira, wakasimwa vaviri nehari Chlorophytum kana Sansevieria, unogona kuchengeta mhepo yakachena, kure formaldehyde kukuvadza.
Mukuwedzera, Ivy anogona kupinza 90% of benzene; agave anogona kumedza 70% of benzene, 50% formaldehyde uye 24% kubva trichlorethylene; akarembera zvitema anogona kumedza 96% carbon monoxide, 86% formaldehyde. Nepo kumquat, mutamba, mirabilis japonica uye Haliotis diversicolor akanga akasimba kuramba rehydrogen fluoride. Wisteria akanga akasimba kuramba nesarufa dioxide, kuiisa chlorine uye rehydrogen fluoride. Camellia, mutamba, Milan nokuti zvikuru chepfu kuiisa chlorine, vane zvimwe Absorção de Água uye kuwanda vanokwanisa; gardenia, mutamba, Milan anogona tibatsirwe indoor sarufa yakasviba; Citrus uye erosemary indoor mhepo kunogona kuita utachiona uye zvigare kuderedzwa Zvikuru.
Kuwedzera pamusoro kunge muchiedza ezvinhu anogona kudzidza kuvenga indoor magasi anokuvadza mune minyoro potted maruva, pane dzimwe maruva usiku kuchenesa mhepo, vari mhando zvikuru zvinowanzovapo Brown chanza, pfupi yebhuruu Garnish, mutsetse Gaelan , Day, mukombe serin'i midzi, kurimwa chihenge uye ingwe Pilan uye zvichingodaro. Uyezve, pane kudyara uku anewo pachena chaizvo zvinobatsira - nyore yokudyara uye nazvo, izvo Zvinowanzotaurwa kuti maruva "waiting zvakanaka."